Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada Dowladda * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada Dowladda
By Ardaan Yare	 On Dec 12, 2019
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya iyo Ururka Al-Shababa kiu dhex-marey Xerada Hiilweyne ee degmada Balcad Gobolka Shabeellaha dhexe.
Dagaalka ayaa yimid,kaddib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Xerada Hiilweyne oo ku taalla inta u dhaxeysa Magalada Muqdisho iyo degmada Balcad,halkaas ay saldhig ku leeyihiin Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo muddo saacado ah socda.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalkaas ugu yaraan shan ruux oo kala ah laba Haween ah oo Shaah ku iibinayey Xerada oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan ciidamada Dowladda ay ku geeriyoodeen tiro kalena ay ku dhaawacmeen,sidoo kalena uu jiro khasaaro soo gaarey Gadiid ay leeyihiin Ciidamada dowladda ee la weeraray.
Wararka saakay naga soo gaarey goobtii lagu dagaalamay ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan,isla markaana ay ku sugan yihiin Ciidamada Dowladda kana wadaan dhaq dhaqaaq Ciidan.
Somalia: Seven dead in Mogadishu hotel attack